Hoods Entertainment – Studio – MMANIME
Fantasista Doll Information _________________________________ Alternative Titles Englishsista Doll Japanese Fanta ファンタジスタドール Type TV Episodes 12 Status Finished Airing Aired Jul 7, 2013 to Sep 29, 2013 Premiered Summer 2013 Broadcast Sundays at 03:28 (JST) Producers Amber Film Works, TOHO animation Licensors Sentai Filmworks Studios Hoods Entertainment, Production IMS Source Original Genres Sci-Fi, Magic, Fantasy Duration 23 min. per ep. Rating PG-13 - Teens 13 or older Review Fantasista Doll ဆိုတဲ့ Anime ဇာတ်လမ်းတွဲကို Hoods Entertainment Studio ကနေဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး IMDb မှာတော့ Rating 10 မှာ 4.6 ရရှိထားပါတယ် ...
Fantasista Doll Fantasista Doll ဆိုတဲ့ Anime ဇာတ်လမ်းတွဲကို Hoods Entertainment Studio ကနေဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး IMDb မှာတော့ Rating 10 မှာ 4.6 ရရှိထားပါတယ် MAL rating 10 မှာတော့ 6.2 ရရှိထားတဲ့ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် . Uzume Ono ဆိုတဲ့အလယ်တန်းကျောင်းသူလေးဟာတစ်နေ့နံနက်ခင်းမှာတော့ရထားနဲ့ကျောင်းကိုသွားနေတုန်းသူ့အိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါလာတာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ် . နောက်ပိုင်းမှာတော့ Uzume ဟာအဲ့ဒိပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီး Fantasista Doll5ခုကိုဆင့်ခေါ်နိုင်တဲ့အပြင် အထူးကဒ်တွေကိုသုံးပြီးအစွမ်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ မာစတာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် . အဲ့ဒိနောက်မှာတော့ Uzume ဟာ Mutual Dream Assurance လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒိအဖွဲ့ဟာ Uzume ကိုနှိမ်နင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်,သူ့ရဲ့အရုပ်တွေကိုခိုးပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ တခြားသော Fantasista Masterတွေရဲ့ဆန္ဒမှန်သမျှကိုဖြည့်ပေးမယ်လို့ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့....ဘာမှမသိသေးတဲ့ Uzume တစ်ယောက်သူ့ရဲ့ Fantasista ...
TMDb: 6/10 votes
The Qwaser of Stigmata Review: Oppaiအလန်းလေး တွေပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားတဲ့ကားတစ်ကားပါ....ဒီကားကိုလည်းအားလုံးသိပြီးကြပြီးလိုထင်ပါတယ်..ထွေထွေထူးထူးတော့ညွှန်းစရာမလိုလောက်ပါဘူး...Ecchiထက် ကြမ်းပါတယ် 18+အခန်းတွေလည်းပါသေးတယ်...အသက်ပြည့်မှကြည့်ကြပါ လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်...နားကြပ်မတပ်ဘဲကြည့်ရင်တော့ မင်မင်တာဝန်မယူပါဘူး: Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode 6
20102010 to jun 20Jan 10
MMANIME © 2021 All rights reserved Developed By MMANIME & Pain Organization